Unoyeuka Here?​—December 2014 | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Mauritian Creole Maya Mixe (North Central) Mongolian Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Zulu
Zvakakodzera here kuti chitunha chomuKristu chipiswe?
Munhu nemunhu anosarudza zvaanoda. Kunyange zvazvo Bhaibheri risina zvarinotaura panyaya iyi, zvinokosha kuziva kuti Mambo Sauro uye mwanakomana wake Jonatani pavakafa, zvitunha zvavo zvakapiswa uye mapfupa avo akavigwa. (1 Sam. 31:2, 8-13)—6/15, peji 7.
Tinoziva sei kuti Mwari haasiye anoita kuti zvakaipa zviitike?
Jehovha akarurama munzira dzake dzose. Akarurama uye akatendeka. Jehovha anewo rudo rukuru nengoni. (Dheut. 32:4; Pis. 145:17; Jak. 5:11)—7/1, peji 4.
Matambudziko api angasangana nevanhu vanoenda kune dzimwe nyika kunoshumira kunodiwa vaparidzi vakawanda?
Matambudziko acho matatu ndeaya (1) kujairana neupenyu hwacho, (2) kusuwa kumba, uye (3) kuwana shamwari pahama dzeko. Vakawanda vakatsungirira matambudziko aya vakakomborerwa chaizvo.—7/15, mapeji 4-5.
Nei vakoma vaJosefa vaimuvenga?
Chimwe chikonzero ndechokuti Jakobho aifarira Josefa uye akamupa nguo yakanaka chaizvo. Vakoma vaJosefa vakava negodo vakamutengesa kuti ave muranda.—8/1, mapeji 11-13.
Nei maturakiti matsva achifarirwa chaizvo uye ari nyore kushandisa?
Ose akanyorwa zvakafanana. Turakiti rimwe nerimwe rinoita kuti tiverenge rugwaro uye rine mubvunzo wokuti saimba apindure. Pasinei nezvaanenge apindura, tinovhura mukati tomuratidza zvinotaurwa neBhaibheri. Tinogonawo kumuratidza mubvunzo watichazokurukura patinodzoka.—8/15, mapeji 13-14.
Chii chinonzi Syriac Peshitta?
Syriac ibazi remutauro wechiAramaic. Mutauro uyu wakatanga kunyanya kushandiswa kuma100 C.E. kana kuti kuma200 C.E. Zvinoita sokuti mutauro wechiSyriac ndiwo wakatanga kushandurirwa zvimwe zvikamu zveMagwaro echiKristu echiGiriki. Bhaibheri rechiSyriac ndiro rakazonzi Peshitta.—9/1, mapeji 13-14.
Vabereki vechiKristu vangaitei kuti vachengete vana vavo sezvinoita mufudzi?
Zvinokosha kuteerera vana kuti uzive zvavanofunga. Shandai nesimba kuti muvape zvokudya zvokunamata. Tungamirirai vana venyu, somuenzaniso, paya pavanotanga kusava nechokwadi nezvavanotenda.—9/15, mapeji 18-21.
Zvii zvichange zvisisipo muUmambo hwaMwari?
Zvirwere, rufu, kushaya mabasa, hondo, kushayikwa kwezvokudya, uye urombo zvichange zvisisipo.—10/1, mapeji 6-7.
Isungano ipi iri muBhaibheri inoita kuti vamwe vakwanise kutonga naKristu?
Pashure pePaseka yokupedzisira aine vaapostora vake, Jesu akaita sungano nevadzidzi vake vakatendeka iyo inogona kunzi sungano yoUmambo. (Ruka 22:28-30) Yakaita kuti vave nechokwadi chokuti vaizotonga naJesu kudenga.—10/15, mapeji 16-17.
Taura mienzaniso miviri iri muBhaibheri inoratidza kuti Satani ariko.
Magwaro anoti Satani akataura naJesu paaiedza kumunyengera. Uyewo mumazuva aJobho, Satani akataura naMwari. Nyaya idzi dzinopa uchapupu hwokuti Satani ariko.—11/1, mapeji 4-5.
“Vanhu vezita rake” vakataurwa naJakobho pana Mabasa 15:14 ndivanaani?
Ava vaiva vaJudha nevemamwe marudzi vakasarudzwa naMwari ‘kuti vazivise kwose kwose kunaka kwouya akavadana.’ (1 Pet. 2:9, 10)—11/15, mapeji 24-25.
Guta reTimgad raiva kupi uye vamwe vanhu vaivamo vaiva nemafungiro akaita sei?
Timgad raiva guta hombe revaRoma raiva kuNorth Africa (yava kunzi Algeria). Chimwe chinyorwa chakawanikwa paicherwa matongo chainge chakanzi: “Kuvhima, Kugeza, Kutamba, Kuseka, Ndiko Kuti Upenyu!” Mafungiro iwayo akafanana neanotaurwa pana 1 VaKorinde 15:32.—12/1, mapeji 8-10.
Unoyeuka Here?—December 2014